Awstaraaliya ayaa ku gacan sayrtay Eurofighters -ka si ay uga hortagto diyaarad Hangari ah oo noociisa ah
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » News » Awstaraaliya ayaa ku gacan sayrtay Eurofighters -ka si ay uga hortagto diyaarad Hangari ah oo noociisa ah
Airlines • Wararka Dalka Austria • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Hangari News • News • Ammaanka • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka
Awstaraaliya ayaa ku gacan sayrtay Eurofighters -ka si ay uga hortagto diyaarad Hungari ah oo noociisa ah
Sida uu sheegay afhayeenka Wasaaradda Difaaca Austria, wax shil noocaan oo kale ah kama dhicin Austria 20 -kii sano ee la soo dhaafay.
Dhacdadii diyaaradda NATO ayaa lagu tilmaamay khatar weyn oo ku wajahan amniga duulimaadyada ”.
Laba dayuuradood oo kuwa dagaalka ah oo u dhashay dalka Austria ayaa isku dayay inay galbiyaan diyaaradaha Hungary.
Dhacdooyinkaasi waxay dhaliyeen canaan aad u weyn oo ka timid Vienna.
Dhacdo ay Wasaaradda Difaaca Federaalka ee Austria ku tilmaamtay “khatar weyn oo ku wajahan amniga duulista hawada,” laba diyaaradood oo Eurofighter ah ayaa qasab noqotay in Jimcihii la dhexgalo si ay u dhexgalaan oo u geliyaan diyaarad Hungari ah oo NATO ah oo qaadatay sanka oo aan la filayn intii lagu guda jiray duulimaadkii la qorsheeyay ee dul marayay dhulka Austria .
Dhacdadan ayaa dhalisay canaan xoog leh oo ka timid Vienna. Wasaaradda Difaaca Austria ayaa sheegtay in hawada qaranka lagu xadgudbo inta u dhaxaysa 30 ilaa 50 jeer sannadkii celcelis ahaan. Hase yeeshee, dhacdadan ayaa sida muuqata ka dhex muuqata xukunka milateriga Austria tan iyo markii afhayeenka wasaaraddu uu si cad uga digay inay u badan tahay inay yeelan doonto “cawaaqib diblomaasiyadeed”.
Sida laga soo xigtay afhayeenka Wasaaradda Difaaca, Gaashaanle Sare Michael Bauer, wax shil ah kama dhicin Austria “20-kii sano ee la soo dhaafay,” iyo kabtanka diyaaradda ee Hungary “wuxuu u dhaqmay sida darawal waddo khaldan ku mara waddo weyn.”
Dhalan-yaraanta lama filaanka ah ayaa dhacday intii lagu guda jiray duulimaad caadi ah oo la oggolaaday oo ku saabsanaa dhulka Austria oo ay sidday diyaarad gaadiid milateri oo Hangari ah oo afar-matoor C-17 ah NATO aqoonsi.
Intii ay diyaaraddu ku soo gashay hawada Austria ruqsad xad -dhaaf ah oo sax ah, waxay si tartiib tartiib ah hoos uga soo degtay halkii loogu talagalay oo ahayd inta u dhexeysa 10,000 iyo 11,000 mitir waxayna, markii ay dul mareysay harada Attersee ee bariga magaalada Salzburg, jooggeedu wuxuu ahaa qiyaastii 1,000 mitir.
Dhaqdhaqaaqaasi wuxuu argagax geliyay milatariga Austria, oo u diray diyaarado dagaal si ay u kaxeeyaan diyaaradaha qalloocan.
Sababaha sanka kadiska ah lama garanayo wali. NATO iyo Hungary midkoodna kamuu hadlin dhacdadan ilaa hadda.